Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.5.3 Gamification
Standard fanadihadiana no mankaleo ny mpandray anjara, fa afaka sy tsy maintsy miova.
Hatramin'izao, efa nilaza taminareo aho momba ny fomba vaovao ny manontany izay nanamora ny solosaina-itantanana tafa sy dinika. Na izany aza, iray lafy ratsiny ny ordinatera-itantanana fanadihadiana dia ny hoe tsy misy olona mpanao gazety nametraka fanontaniana mba hanampy hitarika ny fandraisana anjara. Izany no olana satria fanadihadiana dia sady mandany fotoana sy mandreraka. Noho izany, amin'ny hoavy, fanadihadiana endrika handeha mba hanao ny mari manodidina ny mpandray anjara, ary ataovy ny dingana ny mamaly fanontaniana mahafinaritra kokoa sy lalao-tahaka. Izany dingana izany dia antsoina hoe gamification indraindray.
Indro misy ohatra tena mahafinaritra fanadihadiana mety hitovy, dia aoka ny mandinika Friendsense, ny fanadihadiana anaty baoritra izay toy ny lalao ao amin'ny Facebook. Sharad Goel, Winter Mason, ary Duncan Watts (2010) Te maminavina tena ny olona no mihevitra izy ireo toy ny namany sy ny tena izy ireo raha ny marina toy ny namany. Io fanontaniana momba ny tena sy ny fahatsapana fa toe-tsaina mampitovy mivantana amin'ny olona mahazo ny fahaizany araka ny marina hahalala ny tontolo iainana sy ny ara-tsosialy dia manana fiantraikany ijoroany ny fifandroritana politika sy ny fihetsehana ara-tsosialy fiovana. Conceptually, tena sy ny fahatsapana fa toe-tsaina no mora mampitovy zavatra mba handrefy. Ny mpikaroka Afaka vao nanontany maro ny olona momba ny heviny ary avy eo dia nanontany ny namany momba ny heviny (izany mamela ny fandrefesana ny tena toe-tsaina fifanarahana) ka mety ho nanontany maro ny olona mba hamantatra ny namany 'ny toe-tsainy (izany mamela ny fandrefesana ny toe-tsaina fantany fifanarahana). Indrisy anefa, dia logistically tena sarotra ny dinidinika na ny respondent sy ny namany. Noho izany, Goel sy ny mpiara-miasa nivadika ny fanadihadiana ho Facebook fampiharana izay mahafinaritra ny milalao.
Taorian'ny mpandray anjara nanaiky ho amin'ny fianarana fikarohana, ny fampiharana Nifidy namana iray avy ao amin'ny kaonty Facebook-n'ny respondent ary nanontany ny fanontaniana momba ny toe-tsaina izany namana (Sary 3.9). Intermixed amin'ny fanontaniana momba ny tsapaka voafantina namana, ny respondent ihany koa ny namaly ny fanontaniana momba ny tenany. Rehefa avy namaly ny fanontaniana momba ny namana, ny respondent nisy nanambara tamin'i na ny valin-dia marina, na, raha ny namany tsy namaly, ny respondent dia afaka hampirisika ilay namany mba handray anjara. Noho izany, ny fanadihadiana niely ny ampahany amin'ny alalan'ny fandraisana mpiasa niparitaka be.
Sary 3.9: Interface avy amin'ny Friendsense fianarana (Goel, Mason, and Watts 2010) . Ny mpikaroka niova ny toe-tsaina fitsipika fanadihadiana an-mahafinaritra, gamelike traikefa. Ny fampiharana nanontany mpandray anjara na fanontaniana lehibe kokoa fihafahafana fanontaniana, toy ilay aseho ao amin'ny sary ity. Sary nahazoan-dalana avy amin'ny Sharad Goel.
Ny toe-tsaina fanontaniana dia nalaina avy amin'ny Jeneraly Social Survey. Ohatra, "ve [namanao] mangoraka ny Isiraeliana mihoatra noho ny Palestiniana ao Moyen-Orient toe-javatra?", Ary "ve i [namanao] mandoa ambony hetra ho an'ny governemanta mba hanome rehetra izao fitsaboana?" Ankoatra ireo lehibe fanontaniana , ny mpikaroka afangaro amin'ny kokoa fihafahafana fanontaniana: "ve [namanao] fa misotro divay ny labiera?", ary "ve i [namanao] fa manana ny fahefana hamaky saina, fa tsy ny hery manidina?" ireo fihafahafana fanontaniana nanao ny dingana mahafinaritra kokoa ny mpandray anjara, ary koa afaka mahaliana fampitahana: mety ho toe-tsaina toy izany koa ny fifanarahana ara-politika lehibe fanontaniana toy ny misy fihafahafana fanontaniana momba ny fisotroana sy ny firenena matanjaka indrindra?
Nisy vokatra telo lehibe avy amin'ny fianarana. Voalohany, namana dia azo inoana kokoa ny manome ny valiny ihany noho ny olona hafa firenena, fa na dia mbola tsy mitovy hevitra namana akaiky amin'ny 30% ny fanontaniana. Faharoa, namaly ny-Tombanan'ny ny fanekeko ny namany. Amin'ny teny hafa, ny ankamaroan'ireo ny isan-karazany ny hevitra izay misy eo amin'ny mpinamana no tsy nahatsikaritra. Farany, ireo mpandray anjara dia ho azo inoana ho mahafantatra ny tsy fitovian-kevitra sy ny namany tamin'ny raharaha lehibe ny politika noho ny fihafahafana olana momba ny fisotroana sy ny firenena matanjaka indrindra.
Na dia ny fampiharana tsy misy intsony ny hilalao (indrisy), izany dia mahafinaritra mpikaroka ohatra ny fomba toe-tsaina afaka ny fitsipika fanadihadiana ho zavatra mahafinaritra. More ankapobeny, miaraka amin'ny famoronana sy ny famolavolana ny asa, dia azo atao mba hanatsarana ny mpampiasa traikefa ho an'ny fanadihadiana mpandray anjara. Noho izany, amin'ny manaraka ianao no nanaovany ny fanadihadiana, maka fotoana hieritreretana ny zavatra azonao atao mba hahatonga ny traikefa tsara kokoa noho ny mpandray anjara. Mety hisy hatahotra fa dingana ireo amin'ny gamification mety hanimba angona tsara, fa heveriko fa leo mpandray anjara dia lavitra kokoa ny tahirin-kevitra mety tsara.
Ny asan'ny Goel sy mpiara-miasa ihany koa ny mampiseho ny loha hevitry ny fizarana manaraka: mampifandray fanadihadiana hafa loharano angon-drakitra. Amin'ity tranga ity amin'ny alalan'ny mampifandray ny fanadihadiana amin'ny Facebook ny mpikaroka avy hatrany nanana fidirana ny lisitry ny mpandray anjara naman'i. Ao amin'ny fizarana manaraka, Hodinihintsika ny Fifandraisana eo amin'ny fanadihadiana sy ny loharanom-baovao rakitra hafa kokoa antsipirihany.